संसद बिघटनको सशक्त प्रतिवाद गर्ने तीन दलको निर्णय Global TV Nepal
काठमाडौं । प्रमुख तीन दलको शिर्ष नेताको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको संसद बिघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको नेकपा, काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको शिर्ष नेताको बैठकले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरको हो ।
बैठकपछि जानकारी दिदै नेकपा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन दल एकतावद्ध भएर ओलीको कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने,‘सबै दल मिलेर प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको छ ।’ मङ्गलबार तीनवटै दलको आन्तरिक बैठक रहेको र त्यसपछि कसरी प्रतिवाद गर्ने तय हुने बताए ।
बैठकमा काँग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. सशांक कोइरालालगायत सहभागी थिए । नेकपाका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए । जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी थिए ।
एमबाप्पे २०२५ सम्म पीएसजीमै बस्ने
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्मा(LIVE)
किसानले अझै पाएनन् मल